Renode: chii ichi chimiro uye nei uchifanira hanya? | Mahara emahara
Renode: chii ichi chimiro uye nei uchifanira hanya?
vandudza Icho chirongwa chazvino chisingazivikanwe nevazhinji nezvacho, asi icho chinogona kuve chinonakidza kune vazhinji vanogadzira, amateurs vanoita kwavo prototypes ne Arduino o Raspberry Pi, uye vagadziri vanogadzira mapurojekiti eIoT uye masisitimu akadzika midzi. Neichi chikonzero, ine yakawanda uye yakawanda rutsigiro, tutorials uye zvemukati pawebhu.
Kuziva zvakawanda nezve izvi zvinonakidza open source chirongwa, iwe unogona kuverenga chinyorwa ichi nezvakakosha kuti umuzive uye utange kushanda naye mune ako ramangwana mapurojekiti ...
1 Chii chinonzi chimiro?
2 Chii chinonzi Renode?
2.1 Akatsigira mapuratifomu
2.2 Isa Renode nhanho nhanho pane Linux
2.3 Kumhanya Renode kekutanga uye nhanho dzekutanga
Chii chinonzi chimiro?
vandudza hwaro, sevamwe vakawanda. Kune avo vachiri kusaziva kuti chii ichocho, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti furemu yakamisikidzwa seti yekuvimba nezvinangwa zvakasiyana, uye nechinangwa chekuchengetedza nguva, senge kusimudzira, kugadzirisa matambudziko, kuwedzera kutsigirwa kwezvirongwa, maraibhurari, zvishandiso, nezvimwe.
Chii chinonzi Renode?
Munyaya ye Renode, ihwaro iyo inobvumidza kukurumidza kusimudzira kweyakagadziriswa masystem uye IoT, ichibvumidza kuteedzera epanyama Hardware masisitimu, kusanganisira maCPU, maI / O mapheripendi, masensa, uye zvimwe zvinhu zvemamiriro ekunze. Naizvozvo, izvo zvinokutendera iwe kumhanya, debug uye bvunzo software yakagadzirwa pasina kugadzirisa PC yako kana kushandisa mamwe mapuratifomu.
Kana ari akatsigira ndiroa vakawanda vavo. Pakati payo pane iyo Xilinx, ST Micro, Microchip PolarFire, SiFive, nezvimwe.
Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti Renode iri open source chirongwa, kunyangwe iine rutsigiro rwekutengesa rweAntmicro. Uye zvakare, iyo inobvumidza kutevedzera Arm neRISC-V Hardware, ichibvumira kukurumidza kukurumidza uye rutsigiro rwevagadziri ve software vanoshanda munyika yeIoT.
Renode yakakwana kwazvo, ine simba uye inoshanda. Zvakanyanya, zvekuti timu yeTensorFlow Lite pachayo inoishandisa kukwidziridza otomatiki kuvandudza mukati Arm uye RISC-V mapuratifomu, pamwe neX86, SPARC, uye PowerPC. Hapana kudikanwa kwekuve nemidziyo yemuviri kubva kune aya mapuratifomu ekuyedza
Mamwe mashoko - Yepamutemo webhusaiti yeiyo Renode.io chirongwa
Kana ari akatsigira mapuratifomu yeiyo Renode fomati, kwaunogona kushanda, ndeiyi:
GNU / Linux (inowanikwa pa DEB uye RPM mapakeji pamwe ne .pkg.tar.xz yeArch)
Inogona zvakare kushandiswa mukati meDocker mudziyo
Kurema-kuchenjera, zvinongova makumi emakumi emazana eMMB, saka haisi inorema package.
Isa Renode nhanho nhanho pane Linux
Kutora sereferenzi Ubuntu distro, gadza Renode Zviri nyore sekutevera nhanho idzi:
Kugutsikana kutsamira, senge iko kwe Mono:
Mushure meizvozvo, iwe unofanirwa kugutsa kumwe kutsamira:
Zvino, svika izvi webhu uye kurodha pasi el DEB package.
Chinhu chinotevera chinenge chiri chekuenda kune dhairekitori reDownload uko kwaunotora iyo .deb uye gadza (Rangarira kutsiva zita racho neshanduro inoenderana newe):
Kumhanya Renode kekutanga uye nhanho dzekutanga
Zvino unogona mhanya Renode kekutanga uye tanga nemapurojekiti ako ekutanga. Nekuitwa kwayo, iwe unongofanirwa kuita odha:
Izvi zvinovhura basa hwindo kubva kuRenode kwaunogona kuisa mirairo yekugadzira muchina wekutanga kana kuibata. Semuenzaniso, kugadzira muchina kutevedzera iyo STM32F4Discovery board:
Iwe unogona zvakare ona zvigadzirwa inowanikwa papuratifomu ne:
Nenzira muchina-0 richava iro zita remuchina wakasarudzika kana usati wasarudza imwe. Ichaonekwa se "kukurumidza" kana iwe uchinge wagadzira muchina ...
Para kurodha chirongwa iwe unoda kumhanya pane uyu mushini wakaenzanisirwa kuti uuedze, unogona kushandisa (semuenzaniso: uyu kubva kuAntmicro):
Iwe unogona zvakare rodha pasi kubva kukero yemuno, semuenzaniso, fungidzira kuti iwe unoda kurodha chirongwa chauinacho mu:
Unogona kuona mirairo yese yaunogona kushandisa uye kubatsira kana iwe ukashandisa rairo batsira mukati meiyo renode nharaunda.
Ipapo unogona tanga kutevedzera:
O mumise na:
Ndinovimba zvave zvichikubatsirai imi…
Kunyangwe isingawanzo kuitika, kune akawanda uye akawanda tutorials uye mawebhusaiti maunogona kubvunza ruzivo nezve kushandiswa kweRenode. Uye zvakare, iro repamutemo peji pacharo rine chikamu chedzidziso mavhidhiyo nawo ekudzidza izvo zvekutanga kutanga ako mapurojekiti.
Ona zvinyorwa uye wiki
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » General » Renode: chii ichi chimiro uye nei uchifanira hanya?
Pcb dhizaini: how-to uye software maturusi